Yusuf Garaad: April 2016
Aniga oo ah weriye da’ yar, khibraddeyduna ay kooban tahay ayaa Madaxa Radiyo Muqdisho uu ii diray in aan ka soo warramo munaasabad ay qabanqaabadeeda lahayd Wasaaradda Garsoorku.
Madaxweyne Ku Xigeenka Soomaaliya, Xuseen Kulmiye Afrax Allah ha u naxariistee, ayaa wuxuu la hadlay wadaaddo goobta la isugu keenay.
Hadda ma xusuusto munaasabaddu wax ay ay ahayd, laakiin waxaa madaxeyga ku qormay si wanaagsanna aan u xusuustaa erayo ka mid ah khudbaddii Xuseen Kulmiye aan galabtaas ka duubay.
Xuseen Kulmiye wuxuu ka mid ahaa Odayaasha Dowladda ee lagu tiriyo in uu khibrad dheer oo shaqo uu u leeyahay Bulshada Soomaaliyeed.
Waxaa uu culimmada u sheegay in marka cadowga lala hadlayo la isbuunbuuniyo xagga awooddaada Dowladnimo.
Laakiin marka aad la hadleyso ummaddaada siiba kuwooda waxgalka ah oo aad kaalmada uga baahan tahay, wuxuu yiri, waa in aad u sheegtaa tabardarradaadu sida ay tahy iyo iimahaaga. Oo intaa aadan ugu ekeyn ee aad shaarka iska saarto oo aad tusto sida ay feerahaagu u yaallaan iyo murqahaaga daciifnimadooda. Galabta shaarka ayaan iska saarayaa si aad adinku garab noogu noqotaan, ayuu ku yiri Culimmadii. Ka dibna wuu u xog warramay.
Kulmiye Dowladdiisu waxay ahayd dowlad dhaqaale ahaan, militeri ahaan iyo waxqabadba aad uga heer sarreysay Dowladaha Soomaaliya soo maray tan iyo 2012 oo ay ku jirto midda hadda dalka ka mas’uulka ah.
Laakiin haddana waxaa uu ogaa baahida ay Dowladdu u qabto taageerada shacabka siiba culimmada diinta. Haddii aanay wax u qabanna ay ugu yaraan ka garaabi doonaan tallaabooyinka ay Dowladdu ka gaabisay fahmina doonaan caqabadaha ka hor yimid.
Taageerada shacabka, fahamkooda Dowladda iyo ka garaabiddooda wixii gaabis ah waa saddex qodob oo Dowlad kasta muhiim u ah.
Maanta adduunku waa kooban yahay, laba farriimoodna macquul ma ahan, laakiin haddana in la xusuusnaado in shacabka ay Dowladdu u xogwarranto waa mid lagama maarmaan ah.
Xikmaddani waxay ila tahay mid aan wakhtigeedu dhaceyn oo ay ka faa'iideysan karto Dowladda Soomaaliya, ha noqoto midda hadda jirta oo xilligeedu gebageba yahay ama midda xigta ee curan doonta ka dib doorashada Soomaalida loo ballanqaaday in ay qabsoonto sannadkaan 2016 gudihiisa.
Posted by Yusuf Garaad at 10:02:00
Musuqmaasuqa siyaasadda Soomaaliya waa mid baahsan wuxuuna ugu daran yahay xilliga doorashada Madaxweyne, ha noqdo Madaxweynaha Qaranka ama kuwa Gobollada qaarkood.
Hadda 2016 oo xilli doorasho noocyo kala duwan ah la gelayo, waxaan jecleystay in aan kula wadaago mid ka mid ah waxyaabaha aan ila habbooneyn ee aan kala kulmay doorashadii Madaxweynaha Federaalka ee aan isu taagay 2012.
Natiijadii waxay noqotay in lix murashax oo keliyihii ay si dhab u buuxiyeen shuruudaha.
Aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ka socda Soomaaliya iyo Somaliland ayaa ku kulmay Ankara ka dib markii ay martiqaadday Xarunta Daraasaadka Siyaadaha Dibadda iyo Cilmi-baarista ee Mu’asasada Nabadda.
Waxay ka wadahadleen taariikda kala duwanaashaha siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Laba maalmood oo dodo ah oo dhacay 19-20 April, kooxdu waxay isla eegeen walaaca iyo doonista ka jirta xaaladda hadda taagan, iyada oo ay goobjoog ahaayeen aqoonyahanno Turki ah.
Waxay is weydaarasadeen afkaar iyo fursadaha Somaliland iyo Soomaaliya ee ay aqoonyahannadu iska kaashan karaan.
Somaliland waxaa ka socday Dr. Xuseen Bulaxn, Maxamuud Cabdi Xaamud iyo Xasan Khaliif.
Dhinaca Soomaaliya waxaa ka socday, Prof Xuseen Warsame, Dr. Maxamed Shiikh Cali iyo Yusuf-Garaad oo dhammaantood ka muuqda sawirka.
Waxaa sawirka ka muuqda aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin Turki ah sida Ergeyga Gaarka ah ee Turkiga ee wadahadallada Soomaaliya Iyo Somaliland, Danjire Ahmed Riza Demirer.
Posted by Yusuf Garaad at 05:47:00